Xildhibaan Korneel Ruush oo maanta Muqdisho loogu sameeyey Aas Qaran – Kalfadhi
Aas Qaran ayey maanta Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) Muqdisho ugu sameysay Marxuum Xildhibaan Axmed Mayow Cabdulle (Korneel Ruush), oo shalay si kedis ah ku geeriyooday. Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo Reysal Wasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Kheyrre, ayaa labaduba waxay ka qeyb galeen aaska iyo ku tukashada Saalaadda Jannaasada Marxuumka.
Masjidka Shuhaddaa, oo Madaxtooyada Soomaaliya ku dhex yaala, ayey Marxuumka sidoo kale ku tukashada Salaaddiisa Jannaasada kaga qeyb galeen Xildhibaanno iyo Wasiiro ka tirsan Labada Gole ee Baarlamaanka Soomaaliya. Dhamaan Madaxda iyo Masuuliyiinta Dowladda waxay u duceeyeen Marxuumka, waxaana Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal uu yiri “Alle naxariistii janno haka waraabiyo. Waxa uu ahaa shaqsi af-gaaban oo mar walba ku dadaala cibaadada Alle”.
Isaga oo ka sii faaloonaya qeyb ka mid ah shaqsiyadda Marxuumka ayuu Guddoomiyaha Galaha Shacabku yiri “Korneel Ruush waxa uu ahaa, nin maskiin ah, naxariis badan, oo dadka danta yar aad u caawiya”. Kama uusan qeyb galin Aaska Qaran ee loo sameeyey maanta Xildhibaan Korneel Ruush, balse waxa uu Madaxweyne Farmaajo shalay ku soo qoray bartiisa Tuwitarka ” waxaan aad uga naxay geerida kediska ah ee ku timid Xildh. Axmed Mayow Cabdulle (Kornayl Ruush) oo ka tirsanaa G/Shacabka”.
Alle ha u naxariistee Xildhibaan Axmed Mayow Cabdulle, waxa uu ka mid ahaa Baarlamaankii 9-aad iyo kan hadda ee 10-aad. Sidoo kale, waxa uu Xubin ka ahaa Guddiga Dastuurka ee Labada Gole ee Baarlamaanka Soomaaliya. Dowladda Militariga ahayd ee dalka maamuleysay 1969-1991-kii ayuu la soo shaqeeyey, isagoo ka mid ahaa ciidankeeda, waana meesha ay ugu baxday naaneesta Korneel Ruush.
Marxuumka ayaa shalay galab xanuun deg deg ah ugu geeriyooday magaalada Muqdisho, waxaana maanta lagu aasay qabuuro ku yaala magaalada Muqdisho. Aaskiisa dadkii ka qeyb galay, oo u badnaa Xildhibaano, Wasiiro iyo masuuliyiin kale, ayaa tacsi u diray dhamaan eheladii iyo qarabadii uu ka baxay. Sidoo kale, masuuliyiintii goobta ka hadlay waxay dhamaan Umadda Soomaaliyeed u direen tacsi.
Golaha Aqalka Sare oo isu diyaarinaya ka doodista Miisaaniyadda 2019-ka